के तपाईको श्रीमान श्रीमती बिच झगडा भइरहन्छ ? त्यसो भए यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् कहिल्यै झगडा पर्दैन « Sajhapage24
के तपाईको श्रीमान श्रीमती बिच झगडा भइरहन्छ ? त्यसो भए यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् कहिल्यै झगडा पर्दैन
श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने केहि टिप्सहरु यस्ता छन :
१. कहिल्यै पनि आवेशमा नआउनुहोस
श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाईराख्न तपाई कहिल्यै पनि कुनै पनि हिसाबले आवेशमा आएर गलत ब्यवहार नगर्नुहोस्। भावनात्मक,मानसिक तथा शारीरिक कुनै पनि दृष्टिकोणले आफुलाई सँधै शान्त राख्नुहोस् । एकजना प्रसिद्ध धार्मिक ब्यक्तिले भनेका छन् , मानिसहरु कसरी आफ्ना श्रीमतीलाई कुटपिट गर्न सक्छन् र त्यही श्रीमतीसँग राती सुत्न सक्छन् ?
२. हरेक निर्णय सल्लाहमा गर्नुहोस्
कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा सँधै समझदारीमा गर्नुहोस् । यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा एउटा परिवार भएर गर्नुहोस् । हामीले हाम्रो निर्णय अरुमाथि थोपार्ने बानी त्याग्यौँ भने परिवारिक सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । यसो हुँदा सबैले, आफ्नो पनि यो घरमा महत्व छ है भन्ने महशुस गर्छन्।
३. आफुले बोल्ने कुरामा सँधै सतर्क रहनुहोस्
आफु के बोल्दैछु भन्ने कुरामा सँधै सचेत रहनुहोस् । तपाई तनाब या दुखी भएको बेलामा जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यस्तो हुन नदिनुहोस् । तपाई रिसाएको बेलामा जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा सम्बन्धमा सँधैका लागि दरार आउन सक्छ । बरु, रिस नमरुन्जेल चुप लागेरै बस्नुहोस्।
४. माया देखाउनुहोस्
तपाई सँधै आफ्नो श्रीमान या श्रीमतीलाई माया देखाउनुहोस् । सँधै दयालु र मायालु भएर प्रस्तुत हुनुहोस्।
५. श्रीमान या श्रीमतीको साथी भएर प्रस्तुत हुनुहोस्
श्रीमान र श्रीमती भन्दा पनि एक अर्काको साथी भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। हामी सँधै एउटै घरमा बस्छौँ तर, एकअर्काको बारेमा केही थाहा हुँदैन । यस्तो हुँदा सम्बन्ध लामो समय टिक्दैन र रमाईलो पनि हुँदैन । त्यसैले साथी जस्तो गरी एक अर्काको कुराहरु थाहा पाउनुहोस्।
६. प्रशंसा गर्नुहोस्
आफ्नी श्रीमतीले परिवारका लागि के गरिरहेकी छिन्, त्यसका लागि सँधै प्रशंसा गर्नुहोस् । श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानले गरिरहेको कामको लागि प्रंशसा गर्नुहोस् । सँधै यो भएन, त्यो भएन भनेर गुनासो मात्रै नगर्नुहोस्।
७. सँधै एकआपसको सम्पर्कमा रहनुहोस्
८. पुरानो समस्यालाई बिर्सनुहोस्
९. सामान्य तरीकाले बाँच्नुहोस
अरुको सेवासुबिधासम्पन्न जीवनशैली देखेर ईष्र्या लाग्नु स्वभाविक हो। तर, यसले सम्बन्धमा दरार ल्याउन सकिन्छ । सँधै आफुभन्दा तल्लो आर्थिकस्तर भएका मानिसलाई हेरेर आफ्नो दैनिक चलाउनुहोस्। अर्काको ईष्र्या गर्ने बानीले आफैलाई हानी पुर्याउँछ।
१०. आफ्ना गल्तीहरु स्विकार्नुहोस